Imsizile iCovid-19 uNomuzi Mabena - Ilanga News
Home Izindaba Imsizile iCovid-19 uNomuzi Mabena
Imsizile iCovid-19 uNomuzi Mabena
Uthi kumanje usebhale izingoma ewu-9
UNOMUZI Mabena unxusa abaculi ukuthi basebe-nzise lesi sikhathi.
KUBONA kuyisibusiso kubaculi baseNingizimu Afrika ukuvalwa kwezwe ngenxa yokubheduka kwe-co-ronavirus umculi wesifazane wakuleli njengoba ethi kuzobanika ithuba lokuqhamuka nomculo omusha.
UNomuzi “Moozlie” Mabena, onamakhono ahlukene kwezoku-ngcebeleka njengoba ebuye aziwe ngokwethula izinhlelo zikamabonakude, uthi nakuba lesi sikhathi sinzima futhi ukusabalala kwaleli gciwane kuyinto embi emhlabeni jikelele, kodwa abaculi bangakwazi ukusebenzisa sona bebhala futhi beqopha umculo omusha.
“Imvamisa sibamatasa sinandisa emicimbini futhi simaketha umculo wethu, singabi naso isikhathi esenele sokwenza umculo omusha. ngakho-ke lesi sikhathi njengoba sihleli emakhaya, kungakuhle sisisebenzise ukukhiqiza umculo omusha,” kusho uMoozlie oveze ukuthi umculi ongeke abe nayo i-albhamu noma i-Extended Play (EP) emuva kokuvalwa kwezwe, uzobe evilapha ngokweqile.
Uveze ukuthi njengoba naye ezokhipha ingoma ethi “I’m A Star” kusasa ngo Lwesihlanu, usenazo ezinye izingoma asezibhalile ngaso lesi sikhathi sokuvalwa kwezwe.
“Ngikhuluma nje sengibhale izingoma eziwu-9 kanti kuzona sekunabaculi engicabanga ukuthi bangangena ngizicule nabo. kunenye engicabanga ukuyenza noRiky Rick, enye noThabsie bese kuba noSolo ongumrepha ohlukile kunabanye,” kusho uMoozlie.
Le ntokazi inge-ne emculweni emuva kokunqoba umncintiswano wokwethula uhlelo iMtv Base, ihlula uNomzamo Mbaha ngo-2012. Ezinhlelweni eke yazethula, kubalwa iVuzu Amp Rich Kids.
Iveze ukuthi ifisa ukungena nasekulingiseni njengoba isike yahambela izinhlolokhono eza-hlukene zezinhlelo zikamabonakude.
Iphethe ngokunxusa abantu ukuba ba-qhubeke nokuhlo-nipha imiyalelo kahulumeni yokuhlala emakhaya.
Previous articleUBen 10 ugaqelwe yikilabhu yase-England
Next articlengebhe ezweni ngokuvulwa kwezikole